Uma ucabanga ukuthi ibhulakufesi elingabanjwanga lizosiza ukuthuthukisa isibalo, khona-ke uyiphutha. Ucwaningo lwamuva luye lwabonisa ukuthi labo abambezela ukudla kwabo kuqala ngaphambi kwemini behlisa umzimba wabo futhi banciphise amazinga azo ushukela egazini. Ngenxa yalokho, kuvela amakhilogremu engeziwe, inkumbulo nokugxila kokukhathazeka kubi. Ibhulakufesi ebaluleke ngokukhethekile emzimbeni wengane okhulayo: kubonakala ukuthi izingane ezingenaso isidlo sasekuseni, kakade ngamahora 10-12 zizwa zikhathele. Ukudla nokudla okunempilo kuyisiqinisekiso sobuhle nempilo.
Coffee ngokumelene cellulite
Cabanga nje ukuthi ukuphila kwethu ngaphandle kwekhofi kuyinto engenakwenzeka: lokhu kuphuza kusiza ukujabula ekuseni, kanye nokuqhuba ingxoxo evamile. Kodwa lokhu akusikho konke: uchungechunge lwezimonyo zokulungiswa kwesithombe se-Beauty Cafe kusuka ku-Faberlic kuzokusiza ukuthi uhlale uhle kahle.
Indlela yokudla okunempilo
Amazambane okuphekwa ngophoyizi isitsha sokuqala esasakazwa kabanzi emakhakheni amaningi emhlabeni jikelele. Zonke izithako zalo emva kokupheka zixubha zibe mass mass. Ukuvumelana okunene kwenza isobho-puree ibaluleke kakhulu ekudleni kwezingane, uma kufika isikhathi sokuletha umfanyana wengane. Ukuze ulungiselele izitsha ezinjalo kulula kakhulu ukusebenzisa isisindo se-steamer-Philips AVENT.
Amantongomane amathathu eCinderella
Amantongomane e-Pine acebile ezintweni ezibangela ukulahlekelwa isisindo sokudla okunomsoco nokuphephile. Ngenxa yocwaningo, ososayensi baseKorea bafinyelela esiphelweni sokuthi ama-acids e-polyunsaturated acids aqukethwe kumantongomane omsedari akhuthaza ukukhiqizwa kwama-hormone athumela isignali ebuchosheni mayelana nokuhlukumezeka nokucindezela ukudla. Njengoba udle isipuni esisodwa samantongomane, ungakwazi ukwandisa okuqukethwe kwala ma-hormone egazini ngokulinganiselwa kwama-50%! Umphumela omkhulu kule nkinga ufika ngemva kwemizuzu engu-30. Ngemuva kokuthi "isidlo" esinjalo, isifiso somuntu samahora amane sisesimo esicindezelekile.
Ngokungafani namazambane, atholakala enhlabathini ekwindla, i-artichokes yaseJerusalema ayihlanjululwa ebusika. Ngakho-ke, amapheya odweba phansi enhlabathini ahlale efomeni labo elihle kakhulu: ama-vithamini acwebile futhi ahlwabusayo ngendlela yabo ehlanzekile, edla futhi enempilo yenyama. Njengoba imifino ikwazi ukuzivikela ngokwezemvelo, izilimo eziyizigaxa zayo azibutheli i-nitrate enobuthi, izinsimbi ezisindayo kanye nezakhi zomsakazo. Izazi zokudla zikholelwa ukuthi uma okungenani sithathe ingxenye yesigamu ekudleni kwazo amazambane angenalusizo ne-artichoke yaseJerusalema, babeyoba nempilo enhle kakhulu. Lokhu kunconywa kubaluleke kakhulu entwasahlobo, lapho izilimo eziyizigaxa zamazambane ziqala ukuqina ngamandla, okuholela ekuqongeni kwimifino yezinto ezinobuthi kumapulinini omzimba.
Kuvela ukuthi ukudla okucebile ngemikhiqizo yobisi, kuvimbela ukuthuthukiswa kwesifo sikashukela sohlobo lwesibili, okwenzeka ngenxa yokwehla komzwelo wamangqamuzana omzimba ku-insulin. Ososayensi baseMelika baye benza ucwaningo futhi bafakazela: ubisi, ushizi, i-yogurt nezinye imikhiqizo yobisi kuvimbela ukuvela kwe-insulin-resistance syndrome. Ochwepheshe baphakamisa ukuthi umphumela wokuvimbela uchazwa ngokuqukethwe okuphezulu kwe-calcium, i-magnesium ne-potassium ebisi, okuhlangene nomthelela we-antidiabetic. Ukusetshenziswa njalo kwemikhiqizo yobisi kunganciphisa ingozi yezifo ezinjalo zesimiso senhliziyo, njenge-stroke ne-hypertension.
Abathandekayo bavusa inzuzo yesisindo. Kuyaziwa ukuthi ushukela ungumthombo we-glucose wokudla nokudla okunempilo. Uma izinga lalezi zinto egazini livamile, uzizwa ugcwele. Ukuntuleka kweglucose (ngenxa yokulahla ngokuphelele ushukela) kungabangela ukwanda kwesidlo, ngakho-ke, inzuzo yesisindo.
Ijusi le-Apple nge-pulp liphindwe kabili ngaphezu kokuhlungwa. Ososayensi bavivinya izinhlobo ezahlukene zejusi ngokuqukethwe kwezinto eziwusizo kuzo. Kwakukhona ukuthi isiphuzo esiphezulu kakhulu sinqatshelwe izinto eziningi eziwusizo. Iqiniso liwukuthi ukungcola kwemvelo kucebile kuma polyphenols, enomphumela omuhle emzimbeni. Lezi zinto zithuthukisa imetabolism, zivuselela amazinga egazi we-cholesterol, ziqinisa uhlelo lwe-cardiovascular, futhi zinezimo zokulwa ne-antioxidant and antitumor.
Ngaphezu kwalokho, ucwaningo lwamuva luveze ukuthi i-apple juice inomphumela we-antisclerotic futhi unomphumela omuhle ekusebenzeni kobuchopho. Ukuvimbela izifo zesimiso sezinzwa, izazi zezilwane zincoma ukuphuza okungenani 200 ml of juice apula nge uginindela ngosuku. Ngaphezu kwalokho, ijusi le-apula yemvelo ngaphandle kweshukela elingeziwe liphansi kwama-kilojoule.
Uju kusukela ezikhathini zasendulo lwabhekwa njengomunye wemikhiqizo eyinhloko yokukhuthaza impilo nokukhulisa impilo esebenzayo. Isibonelo, isipuni esisodwa sejuju emva kokudla sinikeza ukuhlushwa kwe-calcium ions kwansuku zonke.
Khipha umthombo owengeziwe wama-khalori!
Umuntu angaphila ngaphandle kwamanzi izinsuku ezimbili kuya kwezinhlanu. Futhi akumangalisi, ngoba umzimba wethu ungama-60-65% amanzi. Amanzi - ingxenye eyinhloko yazo zonke izitho ezibalulekile (ubuchopho, inhliziyo, amaphaphu, izinso), ngakho-ke ukusebenza ngokujwayelekile komzimba kubalulekile ukuphuza okungenani ama-1.5-2 amalitha amanzi ahlanzekile ngosuku.
Kodwa ngezinye izikhathi kubonakala kithi ukuthi kucima ukoma kwakho futhi ugcwalise isidingo somzimba soketshezi ngeklasi yamanzi, kanye nengilazi ye-lemonade. Awukwazi ukubona umehluko? Futhi ngeze, ngoba umnikelo owenziwe nge-piggy bank of calories ngokweqile awukona nje kuphela amapayipi, kodwa futhi uphuza. Ososayensi baseMelika baye babala ukuthi ngaphezu kwamashumi eminyaka edlule, inani lamakholori adliwe yiziphuzo liphindwe kabili. Ngaphezu kwalokho, inkomba yansuku zonke ngezinye izikhathi i-kcal 300 - lena inani eliqukethe ikhekhe elincane ne-bhotela ekhilimu. Vumelana, inani elibalulekile, ikakhulukazi uma uye emgqeni we-warpath onomunwe owengeziwe ezinqulwini zakho. Kuyaziwa ukuthi ama-khalori ayengena kalula ekuphuzeni kunokuphuza ukudla okuqinile. I-Soda iyisisombululo emanzini ama-flavour (hhayi njalo emvelo), ama-preservative yamakhemikhali kanti, nakanjani, umthamo omkhulu ushukela. Ukuphuza konke lokhu, uphazamisa isifo somzimba, ukuthuthukiswa kwesifo sikashukela nokukhuluphala. E-US, kukhona "impi engcwele" ne-soda. Yenza okuthandayo ngamanzi amaminerali noma itiye elihlaza - lezi ziphuzo ziyi-calories encane futhi zizozuzisa umzimba wakho kuphela.
Ukupheka ngokupheka ku-aerogril
Ama-breadstones: ukwakheka, izakhiwo eziwusizo. Ungakhetha kanjani?
Imikhiqizo yokudla okusheshayo
Ukubaluleka kwefayibha ekudleni komuntu
I-folic acid yabesifazane
Isifo sokuqhafaza ikati
Indlela yokufunda ama-eyelashes amahle kakhulu
I-varicose imilenze emilenzeni, ukwelashwa ekhaya
Ubhontshisi ku-tomato sauce
I-Sauce yaseTsatsiki (i-Tzatziki)